राम भाई तपाइका परोपकारी हातहरुलाई सलाम
Friday, 23 February 2018 22:40
गोरखामा घर भएर हाल बेल्जियममा सुशी ब्याबशाय गरेका एक परोपकारी जोडी राम घले र बिना घलेबाट बाबु आमा नभएका टुहुरा विद्यार्थीको पठनपाठन मा सहायोगको लागि भवानी उच्च माबि मान्बुमा दुईलाख रुपैयाँको एक कोष खडा गरिदिएका छन। उनीहरुले असहाय टुहुरा बिद्यार्थीहरुलाई स्नातक सम्मको अध्यापन लाग्ने खर्च कोषबाट गर्ने र कोषको रकम प्रत्येक बर्ष थप्दै जाने घोषणा स्कुलको ५७ औं बार्षिक उपलक्षमा आयोजित एक समारोहका बीच गरेका हुन्। उनले खेलकुदको प्रोत्साहनको लागि दश फुटबल र भलिबल समेत स्कुलका प्रअ काजीराम खत्रीलाई हस्तान्तरण गरे।
बार्षिक उत्सब सभाका सभापति सोम घले रहेका थिए भने गाउँ पालिकाका मेयर पूर्ण दाहाल प्रमुख अतिति रहेका थिए। चिरन्जिबी न्यौपाने द्वारा संचालित कार्यक्रममा गणेश गुरुङ,चिजा तामाङ्ग,सुनिल गुरुङ लगायत बरिष्ट कलाकारहरुले आफ्नो कला प्रदर्शन गरेका थिए।
यसरि प्रवाशबाट चाहे शिक्षा क्षेत्रमा होस् चाहे सामाजिक वा परोपकारी क्षेत्रमा महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ। राम घले जसले केहि वर्ष अगाडी भवन निर्माणमा महत्वपुर्ण योगदान गरेका थिए भने अहिले अर्को परोपकारी योजना सहित गाउँ पसे र त्यो पुरा गरेरै छाडे। उनको आँखा परोपकारमा पहिला पुग्यो तर मोजमस्ती र अन्य फजुल कर्ममा गेन किन ? किनकि उनले त्यो अवस्था आफैले भोगेर आएका हुन्। भनिन्छ सबै कमाउनेहरु दानी हुदैनन् र सबैको मन सत्कर्ममा जादैन। सलाम राम भाई लगायत सबै परोपकारीहरुका मनहरुलाई !
परोपकारको महत्वबारे परापुर्व कालदेखि नै चर्चा हुदै आएको हो। त्यो बेला देखि अहिलेसम्म परोपकार वा उपकारको महत्व त्यत्तिकै रही आएको छ। पौराणिक सन्दर्भलाई हेर्दा राजा बलिले राज्य प्रतिको मोह त्यागि आफ्नो राज्य समेत बामनलाई दान दिए। त्यस्तै दधिचीले अरुको भलाईको लागि आफ्नो सरिर समेत दान गरे। यी पुर्वआधुनिक कालका दानका उत्कृष्ट नमुनाहरु हुन्। दृष्टान्तले देखाउछ कि दिएको दानबाट यी दानदाताहरु कहिल्यै निरास भएनन्। त्यसैले दीपावलीमा समेत बलि लगायत महादानीहरुको पुजा गर्ने गरिन्छ। परोपकारी उद्यस्य सहित दिएको दानले मानिसलाई आनन्द दिन्छ भने त्यो दानाले धेरै जनाको भलो समेत गरेको हुन्छ। दानको बारेमा हिन्दी महाकबि तुलसीदासले भनेका छन् ,"परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। "
अहिले नेपालमा त्यस्तै एक महादानी पात्रको सर्वत्र चर्चा भैरहेको छ। यहि २०७४ फागुन ३ गते छोरी ईश्वरी राणा र ज्वाइँ रुक्मशमशेर राणाले जग्गा रोक्का गर्दा समेत कानुनि रुपमा फुकुवा गराई श्रीजंग शाहले कान्तिपथमा रहेको ३ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा ( झन्डै तीन अरब भन्दा बढीको सम्पत्ति } र सो जग्गामा रहेको घर फत्तेबाल आँखा अस्पतालाई दान दिएका छन।
तर दुख लाग्दो कुरा बिरामीको जिबन रक्षा गर्न बनाइएका अस्पतालमा संचालक र डाक्टरहरुको मिलोमतोमा ठुलाठुला भ्रस्टाचारका खबरले परोपकारी मनहरुलाई आहत बनाउने खबर एक साप्ताहिकमा भाइरल भएर आएको छ। कुरा हो भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको। समाचारमा भनिएको छ," दुई वर्षदेखि ‘बिगारेर’ राखिएको मेसिन तीन वर्षअघि दश करोड पचहत्तर लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । जब कि त्यसबेला उक्त मेसिनको बजार मूल्य चार करोड मात्र थियो । त्यसको मर्मत गरिएको छैन तर मर्मतको नाममा लाखौ रकम खर्च गरेको देखाएर झ्वाम पारिएको छ। भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा प्रकाश न्यौपाने (अध्यक्ष), निर्देशक डा. अञ्जली कुमार झा, विजयचन्द्र आचार्य र गोकर्ण सापकोटालगायत रहेका छन् । डाक्टर झा र वकिल सापकोटालाई अनियमितताको मुख्य ‘डिजाइनर’ मानिन्छ । "
यी परोपकार नामका कलङ्क हुन्। यस्ता कलंकहरुलाई परोपकारी मन भएका सम्पूर्ण नेपालीहरुले नंग्याउनु पर्दछ र सरकारले पनि भ्रष्ट अपराधीहरुलाई समयमै कारवाही गर्नु आवस्यक हुन्छ। यिनै नरपशुहरुले परोपकारको महान अभियान प्रति शंका गर्नु पर्ने अवस्था निम्तिएको छ।
तर मणिलाई फोहरले छोप्दैमा त्यो चम्कन छोड्दैन। आज प्रवासबाट पनि परोपकारी महा-अभियानमा सीतला हातहरु अगाडी बढिरहेका छन। डोल्मा बचाउ अभियानमा एनआरएनहरु जसरि लागे तराइको सितलहर पिडितलाई पनि प्रवासी नेपालीहरुले समेत त्यस्तै सहयोग गरे। त्यो अभियानमा एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष लोक दाहाल लगायतको उल्यख्य योगदान रह्यो। परोपकारी अभियानमा हास्य कलाकार ध्रुमुस सुन्तलीको योगदान त स्वर्णिम अक्षरले लेखिन लायक छ।
More in this category: « बजगाईंको नियात्राकृति ‘भाया साक्रा’ सार्वजनिक	रूसमा ‘लाल सेना’ शताब्दीको कथा »